Qalabkani si fiican ugama shaqeynayo Linux - waa maxay diiwaanada aan eegaa? | Laga soo bilaabo Linux
Qalabkani si fiican ugama shaqeynayo Linux - waa maxay diiwaanada aan eegaa?
En Linux la bulshada had iyo jeer waa inuu ku caawiyaa. Qaybinta kasta waxay leedahay goleyaal, wikis, kanaalada IRC, iwm. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhibaato hore: maxaa qora (diiwaanada) Waa inaan wadaagaa iyo maxaa macluumaadka waa inaan muujiyaa markaa waad i caawin kartaa?
Kuwa bilowga ah, waxaa habboon in la sheego in macluumaadka ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad la wadaagto uu yahay:
1.- Waxa aad sameysay wax yar uun kahor intaanay wax waliba dhicin.
2.- Wixii aad filaysay inay dhacaan. Si kale haddii loo dhigo, sidee bay ahayd inay wax walba u shaqeeyaan si ay u awoodaan inay dhahaan waxay u dhacday "sifiican."
3.- Faahfaahin wixii dhab ahaan dhacay.
Marka, tusaale ahaan, halkan waxaa ku yaal tusaalooyin ku saabsan sida saxda ah ee su'aalaha noocan ah loo weydiiyo:
Waxaan ku rakibay Ubuntu 10.04 (x86 version) laptop-kayga Dell Optithingever 312. Markii aan soo galo, kaarkayga shabakadda Wi-Fi ma ogaan karo Maareeyaha Shabakaddu sidaa darteed ma muujinayo shabakadaha Wi-Fi, in kasta oo isku xirka shabakadda fiilooyinka ay si fiican u shaqeeyaan. .
Waxaan u adeegsadaa Ubuntu 10.04 Netbook daabacaadda kumbuyuutarkeyga System76. Markii aan ku xiro sameecadaha dhagaha, dhawaaqa ayaa ka soo baxa iyaga dhexdooda laakiin sidoo kale wuxuu ku socdaa sameecadaha.
Waxaan isticmaalayaa Ubuntu 10.04. Waxaan u adeegsaday barnaamijka inaan ku rakibo Darawalada Gaarka ah nvidia GeForce FX 5200. Hada markaan dib u bilaabo mashiinka nidaamku wuu laalaadaa oo muujiyaa shaashad madow wax yar uun ka dib markaan tusay shaashadda Ubuntu.
Hagaag, waxaan horeyba u aragnay tusaalooyin sida loo qeexo dhibaatadaada. Si kastaba ha noqotee, markaad la macaamilayso dhibaatooyinka qalabka, waxay u badan tahay inay yihiin dhibaatooyin gaar ah mashiinkaaga iyo kuwa isku dayaya inay ku caawiyaan dib uma soo celin karaan dhibaatada maxaa yeelay iyagu ma lahan qalab isku mid ah. Sababtaas awgeed, waa "caado caafimaad leh" in lagu daro qaar ka mid ah diiwaanada (diiwaanada) ama diiwaanada nidaamka oo ku siin kara qalab badan kuwa isku dayaya inay ku caawiyaan.
1 Macluumaad guud
2 Dhibaatooyinka kaararka fiidiyowga
3 Dhibaatooyinka kaarka codka
sudo lspci -nn wuxuu liis gareeyaa dhammaan qalabka PCI ee la ogaado. Tan waxaa ka mid ah dhammaan kaararka ballaarinta (kaararka fiidiyowga, wifi, iwm.) Ee mashiinkaagu haysto, iyadoo aan loo eegin haddii kernelku leeyahay darawal ku habboon inuu la macaamilo. Macluumaadkani waa mid aad u faa'iido badan, gaar ahaan kiisaska aanad 100% hubin waxa mashiinkaagu leeyahay.
lsusb qor dhammaan qalabka USB-ga ee ku xiran mashiinkaaga. Mar labaad, macluumaadkani wuxuu faa'iido u leeyahay kiisaska aadan 100% hubin waxa mashiinkaagu leeyahay. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu xaqiijiyo in qalabku si sax ah ugu xiran yahay ama uusan ahayn dhibaato xagga qalabka ah (gubtay, iwm).
/ var / log / udev y / var / log / dmesg waxay ka kooban yihiin macluumaad ku saabsan dhammaan qalabka uu firirku soo helay. Faylashaan log ayaa guud ahaan aad u ballaaran. Ilaa aad ka ogaato qayb gaar ah oo ka mid ah kuwa shaqeeya, way ku habboon tahay in lagu daro iyaga oo ah xiriiriyeyaal oo aadan ku dhajin iyaga oo qayb ka ah su'aashaada.
Dhibaatooyinka kaararka fiidiyowga
/var/log/Xorg.0.log Waa faylka qoraalka ee server-ka X (midka gacanta ku haya dhammaan sawirada Linux). Waxay ka shaqeysaa dhammaan kiisaska aad dhibaatooyinka ku qabtid kaarka fiidiyowga.
LIBGL_DEBUG = verbose glxinfo wuxuu soo bandhigayaa macluumaad ku saabsan in mashiinkaagu uu taageerayo dardargelinta garaafyada 3D, taas oo faa'iido u leh kiisaska ay dhibaatadani tahay (tusaale ahaan, dhibaatooyinka Unity iyo barnaamijyada kale ee u baahan dardargelinta garaafyada 3D).
lspci -nn | grep vga wuxuu soo bandhigayaa liiska dhammaan kaararka fiidiyowga ee la ogaado. Tani badanaa waxtar ayey leedahay kiisaska aadan hubin kaarka aad haysato.
xrandr wuxuu soo bandhigayaa liiska qaraarka shaashadda ee la heli karo ee qalabka la ogaado. Ikhtiyaarka lagu calaamadeeyay "+" astaamaha ayaa lagula talinayaa, halka midka xiddigta leh uu yahay midka aan isticmaaleyno. Macluumaadkan badanaa waa mid waxtar leh marka la isku dayayo in lagu xiro in ka badan 1 kormeere.
Dhibaatooyinka kaarka codka
/ proc / asound / kaararka wuxuu liis garayaa dhammaan qalabka maqalka ee la ogaado. Had iyo jeer waa waxtar leh in lagu daro faylkaan faylka ah.
/ proc / asound / card0 / koodh # 0 waxaa ku jira macluumaad ku saabsan kaarka codka ee ugu horreeya, oo ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan dekedda wax soo saar / soo saar. Haddii dhibaatadaadu ay la xiriirto isku xirka qalab aan si sax ah loo ogaan ama uusan si sax ah u shaqeyneynin, waa inaad ku dartaa faylkaan faylka. Haddii ay dhacdo in aad rakibtay wax kabadan hal kaar cod, waxaa jiri doona in kabadan hal tusaha / proc / asound / card ???.
Ugu dambeyntiina, kahor intaadan iibsan mashiin kasta, qalab ama durugsan, had iyo jeer waa lagugula talinayaa inaad aragto liisaska iswaafajinta qalabka oo ay sameeyeen adeegsadayaasha iyo shirkadaha soosaara walxaha aad rabto inaad isticmaasho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Qalabkani si fiican ugama shaqeynayo Linux - waa maxay diiwaanada aan eegaa?
Waad salaaman tihiin, asxaabta DesdeLinux, rakib dhawaan; archlinux on pendrive for toshiba satellite c845 laptop-ka iyo marka hore, dhamaantiis wanaag, ilaa aanan fahmin sababta, laakiin rakibida USB-ga (boot boot in UEFI mode and SECURE BOOT enable), waa la joojiyay in la aqoonsado UEFI iyo halkaas , Kama dhigi karo inay bilowdo mar dambe. Dhibaato kale ayaa ah in taabashadu aysan shaqeyn. laakiin waxaan ku tijaabinayaa qaybinta: (boot in UEFI disable mode) ubuntu, Fedora, Debian iyo touchpad si kastaba uma shaqeeyaan. Wax dhibaato ah kuma qabin tan, waxaan ku dari lahaa jiir iyo maaddo dhammaatay; laakiin shaki la’aan waxaa kugula talin lahaa in qalabkan (touchpad) laga dhigo mid shaqeeya.
Salaan wanaagsan, oo shaki la'aan in qodobkan ay tixgeliyaan kuwa u baahan caawimaadda GNU-Linux.
Ku jawaab userlinux
Waad salaaman tahay! Waxaa laga yaabaa inaad xalka ka heli karto mid ka mid ah xiriiriyeyaasha soo socda:
Xaaladaha sidan oo kale ah, waxaan kugula talinayaa inaad raadiso erayga muhiimka ah ee mashiinka raadintayada (eeg midigta kore). Sanadahan waxaan qornay kumanaan maqaal waxaana macquul ah qaarkood inay kuu keeni karaan xal dhibaatadaada.
Diiwaanka rakibida: Archlinux